SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Boulou Bulgarian Catalan Cebuano ChiSutu (Lesotho) ChiTetun Dili Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Guarani Gujarati Gun Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mingrelian Mongolian Mutauro Wemasaini wokuAustralia Mutauro Wemasaini wokuIndia Myanmar Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tatar Telugu Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
INGUVA yemusangano unokosha chaizvo muJerusarema. Mambo Dhavhidhi ashevedza machinda ake ose, vakuru vakuru, nevarume vane simba. Vari kufara chaizvo nechiziviso chinokosha chavanzwa. Jehovha asarudza Soromoni, mwanakomana waDhavhidhi, kuti avake chivako chikuru chekunamatira Mwari wechokwadi. Mambo Dhavhidhi agamuchira purani yechivako chacho achiita zvekufemerwa uye aipa Soromoni. Dhavhidhi anoti: “Basa iguru; nokuti chivako ichi chikuru hachisi chomunhu, asi ndechaJehovha Mwari.”—1 Mak. 28:1, 2, 6, 11, 12; 29:1.
Dhavhidhi anobva abvunza kuti: “Ndiani anozvipira kuzadza ruoko rwake nechipo [chekupa] Jehovha nhasi?” (1 Mak. 29:5) Kudai waivapo, ungadai wakaita sei? Ungadai wakatsigira here basa iri rakakura? VaIsraeri vakaita chipatapata vachitsigira basa racho. “Vakafara nokupa zvinhu nokuzvidira . . . nokuti vakapa Jehovha zvinhu nokuzvidira, nomwoyo wakakwana.”—1 Mak. 29:9.
Papera mazana emakore, Jehovha akaita kuti pave nechimwe chinhu chakakura kupfuura temberi yakavakwa naSoromoni. Akaita kuti pave netemberi huru yezvekunamata, kureva urongwa hwekuti vanhu vakwanise kumunamata kuburikidza nechibayiro chaJesu. (VaH. 9:11, 12) Jehovha ari kubatsira sei vanhu kuti vayanane naye mazuva ano? Ari kushandisa basa redu rekuita kuti vanhu vave vadzidzi. (Mat. 28:19, 20) Nemhaka yebasa iri, gore negore tiri kuitisa mamiriyoni ezvidzidzo zveBhaibheri, zviuru zvevadzidzi zviri kubhabhatidzwa, uye ungano dzakawanda dziri kutangwa.
Kuwedzera kuri kuitika kunoreva kuti tinofanira kuprinda mabhuku akawanda, kuvaka nekugadziridza Dzimba dzeUmambo, uye kutenga nzvimbo dzekuvakira dzimba dzemagungano. Handizvo here kuti basa redu rekuparadza mashoko akanaka iguru uye rine mubayiro?—Mat. 24:14.
Kuda Mwari nemuvakidzani uye kuziva kuti basa rekuparidza Umambo rinofanira kuitwa nekukurumidza kunoita kuti vanhu vaMwari vauye “nechipo [chekupa] Jehovha” kuburikidza nekupa mipiro. Zvinofadza zvikuru ‘kukudza Jehovha nezvinhu zvedu zvinokosha’ uye kuona zvinhu zvakadaro zvichishandiswa nekuchenjera pakuita basa guru risati ramboitwa.—Zvir. 3:9.
Vakawanda mazuva ano ‘vanotsaura chimwe chinhu’ kana kuti mari yavanozoisa mumabhokisi ezvipo akanzi “Basa Romunyika Yose.” (1 VaK. 16:2) Mwedzi wega wega, ungano dzinotumira mari iyi kuhofisi yeZvapupu zvaJehovha inoona nezvebasa remunyika yadzinenge dziri. Unogonawo kutumira chipo chako kusangano repamutemo rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha munyika yaunogara. Kana uchida zita resangano repamutemo rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha munyika mako, tapota nyorera kana kuti fonera hofisi yebazi remunyika yako. Kero yehofisi yebazi inowanika pawww.jw.org. Zvipo zvaunogona kutumira wega ndeizvi:
Kupa mari uchiibvisa muakaundi yako yokubhengi uchiiendesa muakaundi yebazi renyu. Kune dzimwe nyika, munhu anogona kupa mari achishandisa jw.org kana kuti imwewo website yakasarudzwa.
Kune dzimwewo nzira dzokupa nadzo zvipo zvokutsigira basa roUmambo romunyika yose. Nzira dzacho dziri pasi apa. Pasinei nekuti uri kuda kupa nenzira ipi, tapota tanga wataura nehofisi yebazi romunyika yako kuti rikuudze kuti panzira dziri pasi apa ndedzipi dzinoshanda munyika yako. Sezvo mitemo ichisiyana munyika nenyika, zvinokosha kuti utange wabvunza vanhu vane ruzivo rwezvemitemo nemitero usati wasarudza kuti wopa chipo uchishandisa nzira ipi.
Inishuwarenzi: Munhu angaita kuti sangano rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha rizopiwa mari yake yeinishuwarenzi youpenyu kana kuti yemudyandigere.
Maakaundi Ekubhengi: Munhu angaita kuti maakaundi ake ekubhengi, magwaro anoratidza mari yaiswa mubhengi, kana kuti mari yakaiswa kubhengi kuti azoshandisa kana arega basa zvizopiwa sangano rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha kana afa, zvichienderana nezvinodiwa nemabhengi munyika yacho.
Chipo Chemari Yakawanda (Gift Annuity): Uhwu urongwa hwokuti munhu anopa sangano rinoshandiswa neZvapupu zvaJehovha chipo chemari yakawanda uye gore negore sangano rinozopota richimupa mari yavanenge vabvumirana kweupenyu hwake hwose. Anenge apa wacho anogona kuderedzerwa mari yemutero yaanobhadhara mugore raanenge apa chipo chacho.
Zvipo zvakadai zvinoda kuti ari kupa wacho anyatsoronga. Pane kabhuku kari mumutauro weChirungu nechiSpanish kanonzi Charitable Planning to Benefit Kingdom Service Worldwide kakaitirwa kuti kabatsire vanhu vanoda kutsigira basa reZvapupu zvaJehovha remunyika yose. Kabhuku kacho kanotsanangura nzira dzakasiyana-siyana dzekupa zvipo iye zvino kana kuti munhu wacho paanenge afa. Mashoko ari mukabhuku aka angasanyatsoshanda kwauri pamusana pemitemo yemitero kana kuti mimwewo mitemo yemunyika yauri kugara. Vachishandisa nzira idzi dzekupa, vakawanda vakatsigira basa rechitendero chedu uye rekubatsira vanhu pasi rose, uye zvakaita kuti vakwanise kuderedzerwa mitero yavanobhadhara. Kana kabhuku aka kachiwanika munyika yako, unogona kukakumbira kumunyori weungano yako.